ओलीको दिव्यास्त्रको सामना गर्ने सामर्थ्य होला त खनाल-नेपालसंग ? – ThePressNepal
ओलीको दिव्यास्त्रको सामना गर्ने सामर्थ्य होला त खनाल-नेपालसंग ?
काठमाडौं चैत्र १७ । नेकपा एमाले भित्रको विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । दोस्रो तथा तेस्रो तहका नेता देखि कार्यकर्ता तहसम्म पार्टी एकता कायम हुनु पर्ने आवाज उठिरहेको समयमा एमाले भने अझ चिराचिरा पर्दै छ ।
गुटगत भेला गरेको भन्दैं अध्यक्ष ओलीले खनाल- नेपाल समुहका ४ जनलाई स्पष्टी करण सोधेका थिए । जस मध्ये नेता माधवकुमार नेपाल र उपाद्यक्ष भिम रावलले स्पष्टी करण त बुझाए तर ओलीलाई नै उल्टै स्पष्टीकरण माग गरेपछि ओलीले दुई जनालाई छ महिनाका लागि कारवाही गरे भने अन्य दुई नेता घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण बुझाउन पुन ताकेता गरेका छन् ।
पार्टीलाई एक ढिक्का राख्नु पर्ने आवाज उठिरहदाँ शिर्ष नेताको व्यवहार र भनाईबाट पार्टी एक रहने संभावन कम्जोर बन्दै गएको देखिन्छ । एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ओलीको कदमबाट आफ्नो रौंसम्म नहल्लिएको दावी गरेका छन् । ओलीको कारवाही पछि नयाँ शिराबाट छलफल अघि बढाने जनाएका खनाल ओलीलाई परास्त गरेरै छोड्ने दावी गर्छन् ।
त्यस्तै नेता माधवकुमार नेपाल कार्यकर्तामाझ पुगेर ओलीको प्रतिवाद गर्ने दावी गर्छन् । प्रचण्डसंग निकट देखिएका नेता नेपालले प्रचण्डसंगको छलफललाई समेत तिव्रता दिएको समयमा उनका पक्षका नेताहरुभने ओलीसंगै रहेर अन्तसंघर्षको पक्षमा उभिएका छन् । यसरी उक्त समुहले अव के गर्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ ।
त्यस्तै नेता भुषाल र पाण्डेपनि सहज किसिमको स्पष्टीकरणको पक्षमा देखिदैनन् ओलीलै नैतिकता गुमाएको बताउने नेताहरुले ओलीले स्पष्टिकरण सोध्ने हैसियत गुमाएको समेत तर्क गर्छन् । यसरी एक पछि अर्को छडि चलाएका ओलीबाट बच्न उक्त समुहले के ढाल अपनाउछ सवैको चासोको विषयम बनेको छ ।
Tags: #घनश्याम भुसाल केपी ओली झलनाथ खनाल भिम रावल माधवकुमार नेपाल सुरेन्द्र पाण्डे
Previous नागरिक अगुवासंग ओलीइतरका नेता- मेरै गोरुको बाह्रै टक्का
Next कसैको राजनीति अभिष्ट पुरा गर्ने गरी फैसला आएको भन्दै प्रचणडको सर्वोच्चमा पुनरावेदनको निवेदन